Akụkọ - Banye na igwe ihe ọkụkụ APP wee hụ ka osisi si aghọ pulp?
Banye na igwe ihe ọkụkụ APP wee hụ ka osisi si aghọ pulp?
Site na mgbanwe anwansi site na osisi gaa n'akwụkwọ, usoro dị a didaa ka ọ gafere na ụdị akụkọ ọ nwere? Nke a abụghị ọrụ dị mfe. Ọ bụghị naanị usoro nke usoro, kamakwa ụkpụrụ dị elu yana ihe siri ike chọrọ. Oge a, ka anyị banye n'ime igwe ihe ọkụkụ APP ka inyocha akwụkwọ ahụ site na 0 ruo 1.
Gaa n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Mgbe ị banyere ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na -ebipụ ihe ọkụkụ ndị ahụ n'ogologo nke na -egbo mkpa nke akụrụngwa ahụ, mgbe ahụ, a ga -ewepụpụ mkpuchi (ogbugbo) nke na -adịghị mma maka mma pulp ahụ. A na-eziga edo edo na akwa osisi dị mma na ngalaba nri mgbawa osisi site na sistemụ na-ebugharị mechiri emechi. A na -egwepịa ibe osisi ndị fọdụrụ ma kpọọ ya ọkụ n'ime ọkụ iji nweta ọkụ eletrik. A ga -emegharị mmiri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ewepụtara n'oge nhazi ọkụ eletrik ma ọ bụ uzuoku.
Akụrụ akpaghị aka
Usoro pulping gụnyere nri, mwepụ adịghị ọcha, mwepụ lignin, ịcha ọcha, nzacha mmiri na ịkpụ, wdg Nnwale teknụzụ dịtụ elu, nkọwa niile ga -emetụta ogo akwụkwọ.
A na-eziga pulp osisi esiri esi na ngalaba ịkọwapụta ikuku oxygen mgbe ewepụsịrị adịghị ọcha na ngalaba nyocha, ebe ewepụrụ lignin dị na pulp osisi, ka pulp nwee ike ịcha ọcha nke ọma. nke chlorine na-enweghị ihe, wee jikọta ya na akụrụngwa ịsa akwa pulp dị elu iji hụ na pulp mmepụta nwere njiri mara mma, ịdị ọcha dị elu, ịdị ọcha dị elu, yana akụrụngwa anụ ahụ dị elu.
Nrụpụta dị ọcha
N'oge usoro isi nri osisi, a na -emepụta nnukwu mmiri mmiri na -acha nchara nchara (nke a na -akpọkarị “mmanya ojii”) nke nwere lignin alkaline. Ihe isi ike ịgwọ mmanya ogbugbu aghọọla isi mmetọ na ụlọ ọrụ pulp na akwụkwọ.
A na -eji usoro mgbake alkali dị elu etinye uche n'ihe siri ike site na uzucha wee kpọọ ya ọkụ. A na-eji uzuoku dị elu emepụtara maka ike ọkụ, nke nwere ike izute ihe dị ka 90% nke mkpa ike nke ahịrị mmepụta pulp, enwere ike ijigharị uzuoku na obere nrụgide maka mmepụta.
N'otu oge ahụ, enwere ike ịmegharị alkali dị mkpa na usoro ịgba mmiri na sistemụ mgbake alkali. Nke a abụghị naanị na -ebelata ụgwọ nrụpụta, kamakwa ọ na -enweta nchekwa gburugburu ebe obibi, nchekwa ọkụ na ibelata nsị.
A na -ebipụ bọọdụ pulp a kpụrụ site na onye na -ebi akwụkwọ ka ọ bụrụ nkọwa nke ịdị arọ na nha ụfọdụ, wee bugara ya n'ahịrị nkwakọ ngwaahịa ọ bụla.
Maka ịdị mma maka njem, enwere bọọdụ pulp emechara na eriri ebu, a na -enyocha ha niile mgbe ọkwa ọcha na mmetọ gasịrị.
Ngwa a na -arụ ọrụ na -akpaghị aka n'ụzọ zuru oke, na -emepụta kwa tọn 3,000 kwa ụbọchị. Ewezuga n'oge mmezi igwe, oge ndị ọzọ na -arụ ọrụ anaghị akwụsị akwụsị.
Mgbe ngwugwu mpịakọta nke ọzọ ga -ejikọ bọọdụ pulp, a ga -eji mpempe akwụkwọ kechie ya iji kwado nkwakọ ngwaahịa na ọrụ ụgbọ njem na -esote, yana zere mmetọ bọọdụ pulp n'oge njem.
Kemgbe ahụ, igwe inkjet na -efesa nọmba akara, ụbọchị mmepụta, yana koodu QR maka bọọdụ pulp. Ị nwere ike chọpụta ebe mkpụrụ osisi pulp si dabere na ozi nke ịgba koodu iji hụ na "agbụ" ahụ agbajighị.
Mgbe ahụ stacker na -akwakọta obere akpa asatọ ahụ n'ime otu nnukwu akpa, wee jiri igwe na -ekechi ya mezie ya, nke dabara adaba maka ịrụ ọrụ forklift na ịrụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri mgbe ị na -anọghị n'ịntanetị na ụlọ nkwakọba ihe.
Nke a bụ njedebe nke njikọ "pulp". Mgbe ị kụrụ ọhịa wee rụpụta pulp, kedu ka a ga -esi mee akwụkwọ ọzọ? Biko chere maka akụkọ na-esochi.
Oge ezipụ: Jul-01-2021